दुर्गामाताका फरक रूप : 'काठमाडौंमा फरक छ नवदुर्गा पूजाविधि ?' - Demo Khabar
नवरात्रको सातौं दिन : कालरात्रि मनाइँदै
दुर्गामाताका फरक रूप : 'काठमाडौंमा फरक छ नवदुर्गा पूजाविधि ?'
शुक्रवार, कार्तिक ७ २०७७
काठमाडौं, कात्तिक । नवदुर्गा अर्थात् नौ दुर्गाहरूको समूह नै नेपालीले दसैंको नौ दिनसम्म आराधना गर्ने देवीहरू हुन् । दूर्ग नाम गरेको राक्षसलाई नाश गरेका आधारमा दूर्र्गा नाम राखिएकी देवीका विभिन्न स्वरूपलाई नौ दिनसम्म पूजा गर्ने गरिन्छ ।
नवदुर्गाको सगुण स्वरूपमा भएको आविर्भावको वर्णन मार्कण्डेय पुराणको सप्तशती (चण्डी) मा उल्लेख गरिएको छ । दुर्गाका नौ स्वरूप छन् भनिन्छ । तर, नेपालमै पनि ठाउँ विशेषमा यिनै नवदुर्गालाई समेत भिन्नाभिन्नै चार किसिमका नामले पूजा गर्ने चलन छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका र बाहिर नवदुर्गाको पूजा गर्ने स्वरुपहरू भिन्नाभिन्नै रहेका छन् ।
देवीमाहात्म्य, देवीकवच आदिमा नवदुर्गाको स्वरूपका बारेमा उल्लेख गरिएको एउटा श्लोक छ ।
जसमा भनिएको छ :
तर, यो स्वरूपलाई काठमाडौं उपत्यकामा पूजा गरिँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा बढी तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिने भएकाले पनि यहाँको पूजापद्दति अन्तको भन्दा भिन्न छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने ब्रह्मायणीबाट सुरु हुने नौ दुर्गालाई मूल एवं रुद्रचण्डबाट सुरु हुने नवदुर्गा र जयाबाट सुरु हुने नवदुर्गालाई परिवार मानेर पूजा गर्ने चलन छ ।
अष्टमात्रिकामा एकजना दुर्गा थपेपछि नवदुर्गाको समूह बन्ने गर्छ । जस्तो ब्रह्मायणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इन्द्रायणी, महाकाली महालक्ष्मी यी आठ मात्रिकाहरूको समूह हो भने त्यसमा त्रिपुरासुन्दरीलाई जोडेपछि नवदुर्गाको समूह बन्छ ।
चारवटा हात भएकी, अभय र वरदमुद्रामा बसेर कमलको फूल र खड्ग धारण गरेकी यी देवीको वाहन शादूल(बाघ) हो । यी देवी दुर्गा माताको छैटौं स्वरूप हुन् ।
महर्षि कात्यायनीले सबैभन्दा पहिले उनको पूजा गरेकोले उनको नाम नै कात्यायनी बन्यो । देवी महात्म्य अनुसार यी देवीको भक्ति र उपासनाद्वारा मनुष्यलाई धेरै सजिलैसँग धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चारै फलहरूको प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
श्वेत–वृषवाहनमा सवार भएकी, श्वेत वस्त्र एवं आभूषण पहिरिएकी, चार हात भएकी, अभय र वरद मुद्रा एवं डमरु र त्रिशूल धारण गरेकी देवीलाई महागौरीको स्वरूपमा पूजा गर्ने गरिएको छ । यी देवीलाई नवरात्रको आठौं दिनमा पूजा गरिन्छ ।
सम्पूर्ण कलुषता धुनको लागि, पूर्व–सञ्चित पापबाट मुक्त हुनको लागि श्रद्धालुहरूले यी देवीको आराधना गर्ने गर्छन् । यी देवीको आराधनाले अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।
शुक्रवार, कार्तिक ७ २०७७०९:३३:५९